Sida loo adeegsado iPhone ama iPad sidii kumbuyuutar loogu talagalay Mac | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo isticmaalo iPhone ama iPad sida kumbuyuutar loogu talagalay Mac-gaaga
'Mouse Mobile Remote' waa codsi weyn oo u rogaya qalabkaaga macruufka qalab awood leh oo loogu talagalay Mac-gaaga ama PC-gaaga. Mobile Mouse Remote waxaa loo isticmaali karaa sida jiirka ama trackpad kombiyuutarkaaga, waxaadna u adeegsan kartaa barnaamijka a gacanta fog kooxdaada, laakiin sidoo kale waxay leedahay waxqabad badan oo leh kumbuyuutar lagu dhex dhisay ku jira si aad ugu adeegsan karto xoogaa software ah Mac-gaaga. Qoraalkan, waxaan ku tusi doonaa sida aad u isticmaali karto barnaamijkan si aad u qorto ama u fuliso amarrada kumbuyuutarka ee ku saabsan Mac-gaaga ama PC-gaaga, midig iPhone ama iPad.
1 Adoo isticmaalaya iPhone ama iPad kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarkaaga
2 Kiiboodhka QWERTY
3 Hawlaha kumbuyuutarka
4 Koodhka tirada
5 Adeegsiga Mouse-ka Fog
Adoo isticmaalaya iPhone ama iPad kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarkaaga
U adeegsiga qalabka macruufka kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarkaaga ama kombuyutarkaaga ayaa faa'iido badan yeelan kara. Qaar farsamooyinka in aan ka fakari karo adeegsiga codsigan wuxuu noqon karaa:
Markaad soo bandhigayso waxoogaa shaashad ama borojektar ah.
Marka aad ka daawaneyso fiidiyowyada kombiyuutarkaaga telefishankaaga.
Markaad rabto rada nambar.
Marka uusan kumbuyuutarka kuu shaqeynaynin.
Sida aad ku arki karto sawirka hoose, Mouse Mouse wuxuu leeyahay a kiiboodhka aasaasiga ah ee QWERTY, laakiin sidoo kale waxaa ku jira a kumbuyuutar nambar isku dhafan, iyo kumbuyuutar si gaar ah loogu sameeyay furayaasha kumbuyuutarka toobiyeyaasha iyo furaha fallaarta.
Kabadhku waxay ku xirmaan inta u dhexeysa badhamada oo kaliya kor ku xusan furayaasha U, I, O iyo P (Fiiri sawirka hoose). Intaa waxaa sii dheer, rada lambarka xitaa waxaa ku jira koobi, goyn iyo dhaji xulashooyinka, kaasoo waxtar badan u yeelan doona xaalado kala duwan oo fara badan.
Keyboard QWERTY Dhismaha wuxuu ku yimaadaa dhammaan furayaasha isku midka ah ee aad ka filan laheyd kumbuyuutarka kumbuyuutarka, laakiin waxaa ku jira xoogaa yar oo aad ku xakameyn karto Mac-kaaga uusan kumbuyuutarkaaga kumbuyuutar lahayn. Kuwaas waxaa ka mid ah amar iyo xakameyn, ka mid ah hawlaha kale.
Kiiboodhka sidoo kale waxaa ku jira tiisa F1 ilaa F12, sidoo kale Baxso, Tirtir, Furaha Guriga iyo Dhamaadka. The afar furaha fallaaraha jihooyinka badansidoo kale dusha sare iyo hoose ayaa waliba laguugu daray si aad ugu fududaato.
Sida kumbuyuutarka QWERTY, waxaad sidoo kale marin u heli doontaa furayaasha xakamaynta iyo amarkasidoo kale a furaha wareejinta. Kuwani waxay faa'iido u leeyihiin markaad ku fulineyso amarrada kumbuyuutarka ka codso xoogaa adeeg ah Mac-gaaga.
Mouse Mouse Remote Numeric Keypad waa astaamo wax ku ool ah oo kuu ogolaanaya inaad ku haysato lambar nambar ah Mac-gaaga.Kani waa muuqaal Apple ka saaray wershadaha xisaabinta mobilada, waxayna ku bixisaa oo keliya kumbuyuutarradeeda desktop-ka, laakiin hadda codsigan. waxaad ku raaxeysan kartaa a nambarka furaha, xitaa MacBookga, MacBookga hawada ama MacBook Pro. Waxa kale oo ku jira tuuryo waxtar leh si loo nuqulo, loo jaro, loona dhajiyo qoraalkasidoo kale keydso faylasha oo aad ku abuurto faylal cusub barnaamijyada la taageerayo.
Adeegsiga Mouse-ka Fog
Mouse Mobil isticmaal gurigaaga Wi-Fi si loogu xiro aaladda macruufka ee Mac ama PC, laakiin ku iibsashada barnaamijka, waxaa lagu xiri karaa habab kale oo xiriir ah halkii, sida Bluetooth, Peer-to-Peer, iyo isku xirka USB.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa inaad kala soo bax codsiga Server-ka Mouse Mobilada Mac-gaaga ama PC-gaaga, waad ku samayn kartaa adigoo gujinaya tan iskuxiran, si aad ugu isticmaashid iPhone-kaaga, iPod Touch ama iPad-ka kombuyuutarkaaga. Waa download lacag la'aan ah, laakiin maskaxda ku hay in barnaamijka Mouse Mobile Remote laftiisa laftiisa ay tahay in laga iibsado App Store, uuna ku kacayo € 1,99.
U adeegsiga qalabkaaga macruufka ah kumbuyuutarkaaga Mac ama PC waligiis ma fududaan. Waxaa jira codsiyo badan oo loo adeegsado kumbuyuutarka fog ee App Store, laakiin codsigan oo kaliya ku kacaya 1,99 € Ma tahay ikhtiyaarka ugu fiican, iyo dib u eegista ayaa taageera.
Faahfaahinta 'Mouse Mouse Remote':
La cusboonaysiiyay: 06 / 01 / 2016
Cabbirka: 41.4 MB
Daawashada Apple: Haa
Soo saare: RPA Tech, INC.
U hoggaansanaanta: Waxay u baahan tahay macruufka 6.1 ama ka dib. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
Soo iibso barnaamijka 'Mouse Mobile Remote' toos uga app Store, adigoo gujinaya xiriirka soo socda.
Mouse Mobile Fog1,99
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Sida loo isticmaalo iPhone ama iPad sida kumbuyuutar loogu talagalay Mac-gaaga
Screenshot Ku soo qaad bilaash wakhti xadidan
Nolosha Youtubers waxaa laga heli karaa Steam for Mac